Wararka - Arenti wuxuu Eleczar u Magacaabay Qaybiyaha Maxaliga ah ee Morocco
Hangzhou - Diseembar 24, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kamaradaha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay inay bilaabayaan joogitaankeeda Morocco iyadoo Eleczar uu yahay qaybiyaha noocyadiisa kala duwan ee taxanaha ah.
Shuraakada cusub waxay ku ballaarineysaa horumarinta ganacsiga Arenti kanaalka tafaariiqda ee macaamiisha ee Morocco iyo Waqooyiga Afrika.
Eleczar waa hormuudka Morocco ee qaybiya alaabada guriga ee caqliga badan, sida nalalka caqliga badan, digniinta. Adnane Zeroual, Milkiilaha Eleczar, ayaa yiri, “Markii aan Facebook ku aragnay naqshadda xarrago leh ee kaamirooyinka Arenti, waxaan isla markiiba la xiriirnay Arenti si ay u yeeshaan wadashaqeyn suuragal ah aadna waan ugu qanacnay waxqabadka iyo tayada kadib markii aan tijaabinay badeecadaha, sidaa darteed waxaan go’aansannay inaan qaybinno Arenti kamaradaha bishii Diseembar waxayna soo saareen amarkii ugu horreeyay oo aan dhowaan imaanno. Waxaa si rasmi ah naloogu magacaabay qaybiyaha tooska ah iyo soo dejiyaha kaamirooyinka taxanaha ah ee Arenti tan iyo 1dii Janaayo, 2021. Aad ayaan ugu faraxsanahay iskaashiga waxaanan kalsooni buuxda ku qabnaa xalka aan wada bixin karno Arenti. ”
Iskaashiga tooska ah ee Eleczar waxaa la hirgelin doonaa laga bilaabo Janaayo 1, 2021.
Eleczar wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku siiyo qalab iyo qalab dhammaystiran oo loogu talagalay dhismahaaga, dayactirka warshadaha iyo baahiyaha shaqada guriga.
Tan iyo markii la aasaasay, ELECZAR waxay ku takhasustay soo dejinta, wax soo saarka iyo iibinta qaybaha korontada iyo qalabka beddelka sida jebiyayaasha wareegga, wareejiyayaasha, baararka korontada iyo kuwo kaloo badan, oo loogu talagalay qandaraasleyda, koronto yaqaannada waaweyn iyo shaqsiyaadka. Si kasta oo xalka qaybinta awoodda adiga kugu habboon, waxaad ku xisaabtami kartaa kooxdayada si aad u hesho agabka aad u baahan tahay ee qaybaha degaanka, ganacsiga iyo warshadaha.
Si toos ah bakhaarkeenna ku yaal Meknes, waxaan bixinnaa tiro aad u ballaaran oo ka badan 12,000 oo badeecooyin ah oo ka socda magacyo la aqoonsan yahay sida Siemens, Philips, Fermax, Fresco, General Electric ...
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo: https://eleczarstore.com.